IBSA EJJENNOO CAYAA OROMOO KAARTUM SUDAAN
Sadaasa 11, 2006 -Ummati Oromoo duula koloneeffachuu gita bittuu Habashaatii eegalee bakkayyutti fincila diddaa gabrumaa geggeessaa turuu isaa seenaan raga baha. Ilmaan Oromoo qaqqaaliin lubbuu jijjiirraa hin qabne iti kafalanii QBO-ABOn hoogganamu bu'uuressuu irraa hanga hoogganuutti gahuunis ifaa dha. FDG qajeelfamaa fi hooggana ABOn Sadaasa 9,2005 labsames hawaasa Oromoo maraan simatamee itti fufiinsaan yoona gahuun isaa seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti bakka ol-aanaa qaba.
Nuti miseensoti Cayaa Oromoo Kaartum, Sudaan haalli keessa jiraannu nu dirqee akka silaa barbaadnutti bakka tokkotti walitti dhufnee Waggaa tokkoffaa FDG Ummata Oromoo kabajatuu baannu illee haala ittiin guyyaa kana yaadannee oollu aanjessinee Oromoota FDG irratti wareegaman, kanneen mana hidhaa diinaa keessatti gidirfamaa jiran fi bakka buuteen isaanii hin beekaminiif yaadannoo daqiiqaa muraasaa goonee ibsa ejjennoo armatti aanu baafannee jirra.
1, Qajeelfama ABOn masakamee injifannoolee miseensorta, deggertootaa fi hawwaasa Oromoo maraan gadaa kana keessa agalmeessamaa jiran dinqisiifachaa fiixa bahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo qooda nu irra eegamu bahuuf waadaa keenya ni haaromsina.
2, Qajaalfama haaraa fi yeroo irratti hundaawee Koree FDGn dhihaataa tuee fi simannaa hawaasi keenya godheef dinqisiifataa galfata Oromoota FDG irratti wareegamanii bakkaan gahuuf qooda nu irraa eegamu bahuuf qophii ta'uu keenya mirkaneessina.
3, QBO- ABON hoogganamuu fi gaaffiin ummati keenya kaasaa turee fi kan haqaa ti Mirga uumamaa fi dimokiraasii deebifatuuf falmaa godhamu waan ta'eef naga-jaallattooti, jaarmayooti namoomaa fi mootummooti addunyaa akka nu cina dhaabbatan gaafanna.
4. Ajjeechaa, hidhaa, dararamaa , biyyaa arihatamuu fi walumaa gala gochaa duguugionsa sanyii sirni wayyaanee Oromota irratti raaw'atu akka balaaleffatanii fi dhiibbaa iorratti godhan gaafanna.
Goototi Oromoo QBOf wareegaman bara baraan yaadatamu!
Cayaa Oromoo Kaartum Sudaan.